स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पार्ने दैनिक रुटिनका सामान्य १० गल्ती » Enavanari
स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पार्ने दैनिक रुटिनका सामान्य १० गल्ती
काठमाडौँ – हरेक मानिसलाई आफ्नो स्वास्थ्यको माया लाग्छ । सधैँ तन्दुरुस्त र स्वस्थ रहने चाहना राख्छन् । तर, दैनिक जीवनमा भने गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो सामान्य गल्तीले पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्न सक्छ । यी हुन् मानिसले दैनिक जीवनमा गर्न नहुने १० गल्ती :-
१. कतैबाट घर फर्केपछि मानिसलाई प्यास लाग्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसले उठेरै पानी पिउने गर्छन् । यसरी पानी पिउँदा निल्ने समय पीडा हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो समयमा जहिल्यै पनि बसेर मात्र पानी पिउनुपर्छ ।
२. गर्मीको समय प्रायः मानिसले पंखा या एसी फुल खोलेर बस्ने गर्छन् । जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ । यस्तो बानीले मोटोपनलाई तीव्र गतिमा बढाउने काम गर्छ । त्यसैले यस्तो मौसममा सकेसम्म प्राकृतिक वातावरणसँगै आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
३. केही वर्षदेखि आल्मुनियमको भाँडा प्रचलनमा छ । तर, यस्तो भाँडामा खाँदा शरीरमा आल्मुनियम प्रवेश गर्छ । जसलाई शरीरले रियाक्ट गर्छ । अझ एसिडिक खाना आल्मुनियमको भाँडामा खाँदा स्वास्थ्यमा निकै ठूलो असर पु¥याउँछ । तामा वा काठको भाँडामा खाँदा निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
४. खाने समय राम्रोसँग चपाएर आरामका साथ खानुपर्छ । आयुर्वेदमा पनि भनिएको छ कि हाम्रो मुखमा जति दाँत छन्, त्यति नै पटक खाना चपाउनुपर्छ ।
५. जोकोहीका लागि पूरा निद्रा आवश्यक हुन्छ । त्यसैले रातको समय जरुरी काम नहुँदा पनि जाग्राम बस्ने बानी गर्नुहुँदैन । रातमा लामो समय टिभी हेर्ने, सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने बानीले अनिद्राको समस्या हुन्छ । धूम्रपान पनि निद्राको एउटा कारण हो ।
६. अहिलेको व्यस्त दैनिकीलाई जोडेर धेरै मानिसले ब्रेकफास्टलाई त्यति जरुरी ठान्दैनन् । तर, यस्तो बानीले मानिसमा सधैँ आलश्यको समस्या सिर्जना गर्छ । यसका साथै तौल बढ्ने, एनिमिया, क्याल्सियमको कमी, कपाल झर्ने, ग्यास्टिक र मधुमेहको समस्या हुन सक्छ ।
७. कहिलेकाहीँ मानिसलाई अलि बढी हाछ्युँ लाग्न सक्छ । बाहिर कतै भएको वेला हाछ्युँ आएमा त्यसलाई कतिपयले रोक्ने प्रयास गर्छन् । हाछ्युँ रोक्दा रक्तधमनी फुट्नुका साथै अन्य समस्या पनि निम्तिन सक्छ ।
८. ड्राइभिङको समय मानिस गाडीको झ्याल खोल्न रुचाउँछ । यसरी झ्याल खोल्दा हावा प्रवेश गरी शीतल त हुन्छ तर हावासँगै प्रदूषित कणहरू पनि फोक्सोसम्म पुग्छ । जसले अनेक समस्या निम्त्याउँछ ।
९. ट्वाइलेटमा जमिनको सतहभन्दा अलि माथि उठेको साइफन अहिले प्रचलनमा छ । तर, यस्तो ट्वाइलेट सजिलै सफा हुँदैन । जसले गर्दा गन्ध आउनुका साथै कीटाणुहरू पनि टाँसिएर बस्छन् । जसका कारण एसिडिटी, कब्जियतलगायतका समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले जमिनको सतहसँगै समान हुने खालका साइफनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
१०. मानिस अफिस हिँड्दा विभिन्न सामग्री राखेर ह्यान्डब्यागलाई गह्रौँ बनाउँछन् । यस्तो ब्याग आवश्यकभन्दा बढी गह्रौँ भएमा डिस्क, गर्दन, गठियालगायतका समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले ब्यागमा अति जरुरी सामग्री मात्र राख्नुपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट